Indlela yokwenza i-cinemagraph: yintoni na kunye nezinye izixhobo ezilungileyo | Abadali be-Intanethi
Ishishini lefilimu liya likhula ngokufunwa ngabo basebenzisi balisebenzisayo imihla ngemihla. Ukuba singena nzulu kweli candelo, sifikelela kwisigqibo sokuba zininzi iindlela kunye neziphumo eziye zakwazi ukuchukumisa inani elingenasiphelo lababukeli.
Yiyo loo nto Kule posi, siza kuthetha nawe malunga ne-cinemagraph, Ngokuqinisekileyo uyazibuza ukuba yintoni obu buchule kunye nendlela esinokuyiqhuba ngayo kwaye siyilungelelanise neeprojekthi zethu.
Ewe, ngaphambi kokuba uqhubele phambili kwisifundo esincinci, siya kukuchazela ukuba malunga nantoni kwaye zeziphi iimfihlo ezifihliweyo phantsi komkhono kwiividiyo ezininzi okanye amabala.
1.1 U mzekelo
1.1.2 I intanethi
2 indlela yokwenza i-cinemagraph
3 amagcisa ecinemagraph
3.1 UJamie Beck kunye noKevin Burg
3.2 Ingcongolo + iRader
3.3 I-Koby Inc.
4 Izixhobo zokuyila ii-cinemagraphs
imiboniso bhanyabhanya, ziluthotho lwemifanekiso ehambelanayo okanye edityanisiweyo ngenjongo yokwenza ividiyo. Xa uthi krwaqu nje isenokubonakala ingekho ngqiqweni kwaye i-surreal, kodwa yenye yeendlela ezisetyenziswayo ngaphezu kwazo zonke ekwenziweni kwe-GIFS. Koko ukuqonda ngcono, ngumfanekiso omileyo ngokupheleleyo kodwa xa wahlulwe ube ngamacandelo amabini okanye amathathu sifumana iindawo ezahlukeneyo ezinobomi okanye ezihambayo.
Bubuchule bokuyila obucacileyo, kuba sinokukhetha ukuba yeyiphi indawo yomfanekiso esifuna ukuyenza iphile kwaye sikhululekile ukuyila oopopayi abanobuhle kunye nomlinganiswa othile. Ii-Cinemagraphs zizalisekisa imisebenzi eyahlukeneyo, kodwa enye yazo ngokungathandabuzekiyo kukutsala umdla wombukeli ngoopopayi.
Inokunxulumana okanye ibe neempawu ezifanayo kwinto esiyaziyo njenge-timelapse, kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, sinokuyifumana kwimidiya eyahlukeneyo ye-intanethi efana nenethiwekhi yoluntu okanye kwimidiya eyahlukeneyo yentengiso, kuba ziifomathi ezilungileyo kunye neendlela ezilungileyo zokukhuthaza okanye ukukhuthaza. imveliso ethile..
Ngamafutshane, lukhetho olugqibeleleyo ukuba into oyifunayo kukudibanisa izinto zegraphic ezinje ngemifanekiso, kwaye ungeze oopopayi kuyo nganye yazo. Kwakhona, ekupheleni kweposti, siya kukushiya ezinye zezona zixhobo zibalaseleyo apho unokuthi wenze ezakho kunye nezakho.
Kukho imizekelo emininzi ebalaseleyo ye-cinemagraps, ngoko usenokuba uyibonile kwaye ungayazi. ezininzi zazos zikhona kumaphepha ewebhu ahlukeneyo okanye kwiifomati zomxholo ezahlukeneyo kunye neefomathi esizaziyo. Kolu luhlu luncinci sikubonisa apho unokufumana khona ezinye zazo:
Ukuba siya kulo naliphi na iphepha lewebhu le-gifs ekhoyo, siya kufikelela kwisigqibo sokuba zininzi ii-cinemagraphs ezilungiselelwe kwaye zenziwe ukuba zikhutshelwe kwaye zisetyenziswe kwiiprojekthi ezahlukeneyo. Ngokungafaniyo nee-GIFs, zithandeka ngakumbi, ke zingena ngcono kwimidiya yentengiso.
Kwiinethiwekhi zentlalo ezifana ne-Facebook okanye i-Instagram, ukuba sisebenzisa i-cinemagraph njenge-hasgtah, siya kuba nekhulu labo apho sinokuphefumlelwa khona kwaye sibe nayo njengesalathiso sokudala ezethu.
Ngamafutshane, ukuba umba nzulu kwiintanethi zentlalo uya kuqonda ukuba baninzi abaculi abazinikele ekuyileni iifomati ezifana ne-cinemagraph. Abasebenzisi abaninzi nangakumbi bakhetha ezi ndlela zobuchule kumaphepha abo ewebhu.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokwenza i-cinemagraph, sinokukhetha iinkqubo zoopopayi ezifana ne-Premiere okanye ngokulula nge-Adobe Photoshop, ewe, njengoko ufunda. I-Photoshop ine-animated kunye nenxalenye edibeneyo, apho ungaqala khona ukuyila ii-cinemagraphs zakho zokuqala. Kodwa ukuqalisa, kufuneka sicace ngala manyathelo alandelayo:
Ngaphambi kokusebenzisa umfanekiso, Kuyimfuneko ukurekhoda ikliphu esifuna ukuzongeza njengoopopayi, ngoko ke kubalulekile ukuba sibe nekhamera kunye ne-tripod ekufuphi. I-tripod iya kukunceda wenze intshukumo ibe yelunge ngakumbi kwaye iingxaki aziyi kuvela ngexesha lenkqubo yokurekhoda.
Nje ukuba ividiyo ilungile, kuya kufuneka siqalise usetyenziso lwePhotoshop kwaye silayishe ikliphu. Kule meko, ungasebenzisa nasiphi na esinye isicelo esisebenza ngezi fomati, sincoma Photoshop ukuqala. Nje ukuba silayishe ikliphu, kufuneka sikhethe indawo esifuna ukuyiphila.
Iindawo eziya kuthi nkqi ngokupheleleyo, siya kuzisusa ngokhetho lwesityalo kunye ne-maleko yemaski. Ukuba kwimeko yePhotoshop, sikhetha esinye isixhobo, inkqubo ilula kakhulu, kuba kuya kwanela ukwalathisa iindawo esifuna ukuziphilisa ngazo kunye nezo singazenziyo.
Sakuba sikwenzile oku, kufuneka siyithumele ngaphandle ngokufanelekileyo. Njengomgaqo jikelele, kuyacetyiswa thumela ngaphandle ngefomathi yeGIF.
UJamie Beck kunye noKevin Burg
Umthombo: Idayari yoPhulo
Bobabini ngabaculi be-cinemagraph kwaye babonwa njengabameli abaphezulu. Imisebenzi yakhe isetiwe kuhambo okanye indlela yokuphila edumileyo yokufota. Ubumnandi kunye nobuchwephesha bakhe buye benza ukuba eminye yemisebenzi yakhe itsalele ingqalelo kubathengi abaninzi abadumileyo kunye nabameli belizwe lefashoni. Ngaphandle kwamathandabuzo, umsebenzi wabo uphumelele kakhulu kwaye banokusebenza njengenkuthazo enkulu.
Ingcongolo + iRader
La magcisa abonakaliswe ngokukhokela iifilimu ezinoopopayi kunye nokudala ii-GIFS. Umxholo ophambili wemisebenzi yakhe ubuyela kwihlabathi elizayo kunye nehlabathi. Kwi-GIF nganye yakhe, basebenzisa imvelaphi ye-monochrome edla ngokuba mhlophe. Into ebonakalisa imisebenzi yakhe kukuba izinto ezibonakala kuzo zidla ngokuba yimifuziselo edanisa ngesingqi kwaye ijike ngokwazo. Yintoni ebangela ukuba kumbukeli umphumo obonakalayo wokunyakaza kunye ne-dynamism eyenza ingqalelo eninzi kwabo bayibonayo. Ngamafutshane, ngabaculi abafanelekileyo.
Ukuba ufuna ukwenza oopopayi ezonwabisayo ngokucofa uburharha kwaye uzikhwebule kwinto enzulu kunye nedemure, unethamsanqa. I-Koby Inc, ligcisa elizinikele kwihlabathi loopopayi, ngakumbi ukuba lidityaniswe ngumsi kunye nokuhleka. Eli gcisa lisebenze kumacandelo amaninzi, ukuqala ngefashoni kunye neentengiso.
Lilona gcisa lifanelekileyo kuyo yonke loo misebenzi apho ufuna ukuyidlala ngoburharha kunye noyilo kodwa ngaphandle kokuphambuka kude kakhulu kubuchwephesha kunye nokwakhiwa ngokuchanekileyo. Ngamafutshane, unokujonga imisebenzi yakhe kwaye uya kuyazi ukuba sithetha ngantoni.
Izixhobo zokuyila ii-cinemagraphs
Photoshop sesinye sezixhobo zeAdobe ezithi, Ngaphandle kokuba ibigxile kuyo yonke le minyaka ekuhlelweni komfanekiso kunye nokuphinda kuthintelwe, ikwanecala layo lokusebenzisana apho unokudlala kwaye wenze oopopayi bakho bokuqala. Ngaphandle kwamathandabuzo yinto oyifunayo ukuqala ukuyila ii-cinemagraphs zakho zokuqala, kuba inoluhlu olubanzi lwezixhobo zokuphinda uchukumise iiprojekthi zakho. Kwakhona, ayisiyi kuzenza kuphela, kodwa unokusebenzisa izihluzi kupopayi, zombini zifudumele kwaye zibandayo, kwaye ngale ndlela yenza kube nomdla ngakumbi.
IFlapix sesinye isixhobo esifana nePhotoshop, kuba iqulethe inxalenye yopopayi eququzelela ukudalwa kwee-cinemagraphs. Esi sicelo siyilwe ngenjongo yokwenza kube lula kuwe ukuyila iiprojekthi ngobu buchule, ngenxa yobukho bezihluzo zefilimu onokuthi uzikhuphele kwaye uzisebenzise.
Ukongeza, ukwanakho ukongeza amaqhosha asebenzisanayo kwimisebenzi kwaye uwaqondise kwakhona, okuya kuvumela umbukeli ukuba ahlangane noluhlu olubanzi lwee-animations. Ngokufutshane, ngaphandle kwamathandabuzo sisixhobo osifunayo ukuze uqalise ukuyila, enkosi nakwi-interface yayo elula.
I-Zoetropiz kufuneka ibe yinkqubo yomlingo endaweni yoyilo lopopayi. Ngesi sixhobo uya kuba nakho ukuyila ii-cinemagraphs zakho zokuqala ngokuguqula imifanekiso yakho ibe ziividiyo ezinoopopayi ngonqakrazo nje olunye. Ukongeza, ikwabonelela ngezixhobo eziyimfuneko ukuba uqalise ukuyila.
Vumela icala lakho lokudala lihambe, kwaye uqale ukuzama esi sixhobo. Ukongeza, akusiyo nasiphi na isixhobo, njengoko sesona sisetyenziswa kakhulu kwinkalo yoopopayi kunye nomfanekiso. NgeZoetropiz, unayo yonke into oyifunayo ukuze uqalise. Ukongeza, ikuvumela ukuba uthumele ngaphandle iiprojekthi zakho nje ukuba zigqityiwe.
I-Pixel Motion sisixhobo sethu sokugqibela kuluhlu. Kwaye hayi ngenxa yokuba yeyokugqibela yeyona imbi kakhulu, kodwa ngokuchaseneyo. Ngesi sixhobo unokwenza ii-animations ezingenasiphelo, kuquka ii-cinemagraphs. Ikhathalogu yayo ebanzi yeziphumo yenza iiprojekthi zakho zibe nomdla ngakumbi. Ukongeza, akunzima ukuyisebenzisa, kuba ujongano lwayo lubanzi kwaye kulula ukuhamba ngalo.
Ngamafutshane, ngePixel Motion ungayila yonke into ozimisele ukuyenza kwaye uzise oopopayi ebomini, kufuneka ube nobuchule kwaye ubenze ngendlela othanda ngayo. Sisixhobo esigqibeleleyo.
I-cinemagraph bubuchule obukhoyo kule minyaka imbalwa idlulileyo. Kangangokuba kukho amagcisa amaninzi athi, ngenxa yemisebenzi yawo, amajelo amaninzi kamabonakude akhethe ukusebenzisa oopopayi njengeendawo ezincinci zentengiso.
Umxholo wayo ngumfanekiso opopayi uhambele phambili kakhulu, kangangokuba ukwazile ukuwela isikrini kwaye ufikelele kushishino lwefashoni. Ngoku lixesha lokuba uqalise ukuyila ii-cinemagraphs zakho zokuqala. Khumbula ukuba ungasebenzisa ezinye zezixhobo esizicetyisileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » indlela yokwenza i-cinemagraph
Kutheni imidiya yoluntu ibalulekile kwiNtengiso yangaphakathi?